Mpanendaka anaty fiara sy mpanao sinto-mahery no tratry ny Mpitandro filaminana - Madagascar Informations
Mpanendaka anaty fiara sy mpanao sinto-mahery no tratry ny Mpitandro filaminana
7 novembre 2017 9 novembre 2017 Madagascar Informations Aucun commentaire
Ny Alahady 05 novambra 2017 dia tovolahy miisa roa (02) 20 sy 24 taona no voasambotry ny Polisy avy ao amin’ny Boriboritany faha-4 etsy Isotry teo ampanaovana ny asa ratsiny.
Tokony ho tamin’ny 10 ora maraina dia nisy olona tsotra nampandre ny polisy nanao fisafoana teny an-toerana nilaza fa misy tovolahy roa manaraka fiara sy misintona zavatra ao anaty fiara eny amin’ny faritra EPP Ambodin’Isotry sy ny ABC school iny . Nandray andraikitra avy hatrany ireo Polisy teny an-toerana ary dia tratra teo ampanaovana ny asa ratsiny teo amin’ny Aigle noir ny lehilahy iray fantatra amin’ny solon’arana hoe NGORO raha toa ka tafatsoaka kosa ny namany i hafa raha vao nahatazana ny polisy.
Ny mpanendaka iray hafa kosa dia tratra teny amin’ny Tetezan-dRamala tokony ho tamin’ny 7 ora hariva. Fampitam-baovao hatrany no nahafatarana fa nisy tovolahy iray nanendaka olona teny tamin’io fotoana io. Rehefa nidina teny an-toerana dia tratra teo am-panarahana olona ity farany ary mbola nahatratrarana finday iray avy nangalarana teny aminy.
Zava-dehibe ho an’ny Polisim-pirenena ny fampitam-baovao avy amitsika vahoaka, isika rehetra mifanome tanana no antoka iray ahafahana misoroka sy miady amin’ny tsy fandriam-pahalemana.
CSP4 Ambodin’isotry : http://www.policenationale.gov.mg
← Meilleurs vœux au PRM pour son 59 Ans
Mikorontana ny fanatanjahan-tena malagasy noho ny fahamaroany tsy fanarahan-dalana →
Les recommandations pleines de sagesse du FFKM (Midi du 27/11/2018)
27 novembre 2018 Madagascar Informations 0